४ बजे आउने भनिएको एसईईको नतिजा प्रकाशन हुन किन भयो ढिला ? यस्तो छ कारण !
राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ल्डद्वारा आज दिउँसो ४ बजे सार्वजनिक हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) नतिजा प्रकाशनमा केहि ढिलाई भएको छ।
परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयाले तोकेको समय किन परीक्षाफल प्रकाशन भएन भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले ५ बजेभित्र रिजल्ट सार्वजनिक हुने बताएका छन्। उनका अनुसार ३ बजेलाई बोलाईएको बोर्डको बैठक बस्न ढिला भएका कारण नतिजा निकाल्न केहि ढिलाई भएको हो।
यतिबेला बोर्डको बैठक बसिरहेको छ भने बैठक सकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरिने छ ।
प्रकाशित : शनिबार, असार ०९, २०७५१७:००
एसईई नतिजा प्रकाशनमा अझै केहि ढिलाई हुन सक्ने: सफ्टवेयरमा देखियो समस्या
८० प्रतिशत रोजगार दिने कलेज !
प्रहरी उपरीक्षक पोखरेलको अन्त्येष्टि!
गैरकानुनी रुपमा बन्दुक चलाउने एक व्यक्ति घरबाटै पक्राउ !
बेहुलाका बाबु–आमासहित छ जनाको ज्यान गएपछि पूरै गाउँ शोकमा डुब्यो !
बाघको छाला बोकेर हिँडेका दुईजना आकाशे पुल नजिकैबाट पक्राउ !